CCI Ivato Banga ny toeran�ny Profesora Zafy sy Amiraly Ratsiraka
Tranga iray nanaitra sy nanamarika ny andron�ny sabotsy 26 novambra 2016 fisokafan�ny fihaonana an-tampon�ny Frankofonia ny fanatrehan�ireo filoham-panjakana nifandimby nitantana an�i Madagasikara. Hita teny an-toerana nanatrika io lanonana tamin�ny fomba ofisialy io, ohatra,
ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc niaraka tamin’ny ramatoa vadiny sady ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra Ravalomanana Lalao. Tonga teny koa ireo filohan’ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy Ratsirahonana Lala Norbert ary ireo praiminisitra mirahalahy Rabemananjara Charles sy Monja Roindefo. Voaasa ihany ireo filoham-pirenena teo aloha Profesora Zafy Albert sy ny Amiraly Ratsiraka Didier. Banga kosa anefa ny toeran’izy ireo satria ny zoma efa tamin’ny 5 ora hariva vao voarain’izy ireo ny karatra fanasana ary efa nisy ny fandaharam-potoana hafa tsy maintsy natrehan’izy ireo, araka ny fampitam-baovao voaray.